Ọrụ Mgbasa Ọsọ Ngwa - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Ọ bụghị naanị na Anebon na-enye ọrụ ahaziri maka imepụta ngwaahịa dị ala, na-echebara usoro mmepụta ihe ọhụụ, kamakwa ọ na-enye ọrụ nhazi ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ ọhụụ n'okpuru mmepe, anyị nwere ike ịnye ntụnye nhọrọ ihe onwunwe, usoro ịkpụzi yana ọgwụgwọ ala. Na aro ndị ọzọ, Mee ka imewe gị dịkwuo irè, na-achọpụta ihe okike gị na akụ na ụba na ngwa ngwa.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Ndenye Ntanetị dị iche na prototyping, na ọ chọrọ ọkwa dị elu nke ịdị mma, nkwughachi, yana ihe siri ike chọrọ maka ngwa mmepụta. Na nke a Anebon bụ otu n'ime ole na ole na ụlọ ọrụ bụ ezigbo onye na-emepụta ngwa ngwa.
Anyị bụ ọkachamara na mmepụta nke nnukwu njiri mara ọnụ ala. Na a nso nke teknụzụ na ọrụ, anyị bụ ndị zuru okè onye-nkwụsị-shop maka niile gị prototyping mkpa.
Prototypes bụ nnọọ uru maka imewe ndozi, na ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị mkpa ngwa ngwa na-emepụta anụ ahụ akụkụ iji kwado atụmatụ ma ọ bụ nweta ohere dị mkpirikpi ohere.
Dika otutu akuku nke emeputara na ulo ahia ndi ozo ugbua choro uzo ise, ihe nkpuchi 5 na axing bu ndi choro maka ngwa di iche iche na otutu ulo oru ndi ozo tinyere ulo oru ugbo elu, ulo oru ugbo ala, ulo oru ugbo ala na ume. ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Njirimara igwe na-aru oru mejuputara uzo di elu karie, idozi uzo, na oge mbu ma meputa uzo di egwu maka ohere ahia ohuru.
Ntak-ahọrọ Anebon maka ngwangwa prototyping?
Ngwa ngwa ngwa: Otito ngwangwa 1-7 ụbọchị zuru ụwa ọnụ nnyefe, obere olu mmepụta nhazi 3-15 ụbọchị nnyefe zuru ụwa ọnụ;
Ezi Uche: Na-agwa gị ihe ndị ga-enyere gị aka ị nweta akụrụngwa, usoro nhazi yana ọgwụgwọ gị;
Mgbakọ efu: A na-anwale ihe ọ bụla na mgbakọ tupu ịnyefe ya iji mee ka ndị ahịa zukọta n'ụzọ dị mfe ma zere igbu oge nke nrụgharị rụpụtara.
Nwelite usoro: Anyị nwere ndị ọrụ ahịa ahịa 1 ruo 1 iji melite ọganiihu ma kwue okwu metụtara ya n'ịntanetị.
Mgbe-Sales Service: Ndị ahịa na-enweta nzaghachi site na ngwaahịa a ma anyị ga-enye azịza n'ime awa 8.